Central & South America Ajendina Buenos Aires
Ruzivo Rukuru Kune Vafambi
Kufamba uye Leisure Magazine yakarongedza Buenos Aires senhamba yeguta rimwe muLatin America kuti inoshanyira mumaguta ayo akanaka munyika yose yakatarwa mugore ra2011. Nhoroondo dzakawanda, Argentina, neBuenos Aires kunyanya, iri kutarisana nekushanyirwa. World Economic Forum yakarongedza kuti, muna 2008, kutarisa kwakagadzira madhora mazana maviri emadhora emadhora emadhora ekudhura kwezvemari, uye yakashanda 1.8 mamiriyoni. Kutashanyira kwemukati kwemukati kwaive kune makumi mapfumbamwe kubva muzana zveizvi uye kutasva kubva kune dzimwe nyika kwakapa US $ 4.3 mabhiriyoni, sezvo yakave yechitatu yepamusoro yekushandura kune dzimwe nyika muna 2004.
Nzvimbo Yemahofisi Ekutenderera yeBuenos Aires
Izvi zvinowedzera mukushanyirwa hazvina kukanganisa. Argentina yose yakave ichivaka zvigaro zvayo sechando chinotyisa kwekufamba kukuru kwemakore gumi. Kuvaka pamusoro petatura yemombe, yewaini, uye tango iyo yakave yakakonzerwa nevashanyi munguva yakapfuura, guta reBuenos Aires rakanyatsotarisirwa mukupa vangave-vave vashandi nemashoko ose pamusoro pezvimwe zve "Paris yeSouth America "nemishandirapamwe, marangariro, uye webhusaiti yepamusoro yekutenderera: http://www.bue.gov.ar/.
Nzvimbo yehutachiona yezvekushanyirwa yeBurosos Aires ine zvikamu zvakawanda zvaunotarisira uye mumitauro mitatu kwete (ChiSpanish, Spanish, uye Portuguese). Iine ruzivo rwakakura pamusoro pemari, kutakura, uye mamiriro ekunze. Heano zvikamu zvishomanana zvewebsite yedu yatakawana kunyanya kuchenjera kana kunakidza.
Zvinyorwa zvinoshandiswa: Bhuku rino rewebsite rinopa mazita emakumi matanhatu ekunze mabhodhi asina kungomiririra nguva yekuedzwa, asi akanyora vanyori vakuru, vanofunga, uye vanonwa mumasvingo avo. Nhamba yacho inogona kusvibiswa nemunharaunda uye umwe neumwe ane tsanangudzo yakajeka kukupa pfungwa ye "onda" kana vibe yebha.
Mhemberero (Temas): Chikamu ichi chinoputsa zvipiriso zveguta maererano nemitemo yaunotevera mushure memaitambo, fashoni, tango, mabhaji, uye unyanzvi hwokutumidza asi zvishomanana.
Kushanyirwa: Kunyange zvazvo kune huwandu hwakanaka hwekutenderera huripo muguta, unogona kugara uchienda woga. Shandisa iri chikamu chewebsite kuti uwane rwendo rwakakodzera zvakanakisisa zvaunofarira.
Agenda: Chikamu ichi ndechimwe nzvimbo dzepamusoro-soro pane webhu kuti uwane zviitiko zvitsva, zviratidzo, makonti, uye zviitiko zvetsika muBuenos Aires.
Izvi ndezvikamu zvishoma zvezvikamu zvakawanda pa http://www.bue.gov.ar/. Ongorora iwe webhusaiti uye ona kuti nei vanhu vazhinji vachikwira kuBuenos Aires!
7 Great Hostels muSan Telmo, Buenos Aires
Teatro Colón - Buenos Aires Opera House
Chikwata Chigadzirwa muBuenos Aires
Weekend Rwendo rwekushanya Buenos Aires
Zviratidzo Zvishanu Unobva kuBuenos Aires
5 Mabasa Anofadza Mhuri muBuenos Aires
Zvinhu Zvakanakisisa Zvingaitwa muSan Antonio
FedEx Field Stadium (Redskins Tickets, Parking uye More)
Top 10 Romantic Attractions ku Albuquerque
Izvo Zvisingaiti-Kuzviita pane Kambani Kamu
Mutambo weBlossom Kite 2018 muWashington, DC
Ona Dhidhi-In Movie muA Arkansas
Tsamba Yekuenda Kunotengesa Mitengo
The 8 Best Best Alcatraz Tours to Buy in 2018
RVing 101 Mufambiro: Propane
I8 Zvinhu Zvakanakisisa Zvingaitwa Mukati muDhihi
Kana Niwa Falls Falls Yakasvava Zvakakosha Here?
Interactive Children's Science Museums mu Arkansas
Atlantis Water Park muClarksville, Indiana
Kwokuenda kuSpain muna May: Guta neGuta